Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Daag-The Fire Ee Maanta Oo Kale La Daawaday (+Video) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Daag-The Fire Ee Maanta Oo Kale La Daawaday (+Video)
Daag-The Fire waa mashruuc hirgalay misane Hit weyn noqdayw waxaana hogaamiyaal ka ahaayen Chandrachur Singh, Mahima Chaudhry iyo Sanjay Dutt.
Waxaa la daawaday maanta oo kale 19 Febraayo sanadkii 1999 waxaana filmkaan iska leh oo qarash gareye iyo Director ba ka ahaa Raj Kanwar.
Fadlan Hoose Ka Akhriso Xaqiiqada Filmkaan Laga Diiwan Galiyay:
Xaqiiqada 1aad: Harish Patel ayaa filmka dhexdiisa inta ay jilayaan ku dhahayo Mahima Chaudhry ina keen aan kuu geye Subhash Ghai si uu shaqo kuu siiyo balse sida rasmiga ah Subhash Ghai Mahima shaqo ayuu siiyay asigo sanadkii 1997 filmkiisa Pardes kusoo caan bixiyay.
Xaqiiqada 2aad: Markii filmkaan duubistisa la bilaaway Director Raj Kanwar waxuu wada hadal la galay kooxa cajaladaha qeybiyaan si uu oga iibsado filmkiisa maadama uu isla isaga maal galiye ka ahaa.
Balse kooxa cajaladaha lacaga uu Raj Kanwar dalbaday wey ku gacan seeren sababto ah hogaamiyaha filmkan aye iska diiden waayo filmka waxaa hogaamiye ka aha Chandrachur Singh oo xiligaas awood leheen sida awged Director Raj Kanwar waxuu sameyay Sanjay Dutt doorkisa ayuu balaariyay maadama Dutt markii hore muuqaal marti kaliya kulahaa filmka.
Waxaa dhacday in labadooda ay hogaamiyan filmka sido kale Kanwar asigoo qancinaayo kooxa cajaladaha waxuu kusoo daray hees u gaara h Sanjay Dutt filmkaan taaso lagu magacaabo “Lucky Kabootar”
Xaqiiqada 3aad: Heeska Lucky Kabootar waxaa diyaarisay hesaaga weyn ee Sukhwinder Singh xaaskisa oo lagu magacaabo Tejpal Kaur balse dadkale aye u diyaarisay hase ahaate fasax la’aan ayuu Sukhwinder heeskan Raj Kanwar kusiiyay.
Xaqiiqada 4aad: Raj Kanwaar heeskan waxuu ugu talo galay 10 daqiiqo in ay socoto waana sida uu ka rabay maadama Sanjay Dutt uu qaadayo sido kalena ay ugu qancaan daawadayaasha.
Xaqiiqada 5aad: Daag waxuu noqday mashruuc aad iyo aad loo soo dhaweyo waliba daawadayaasha ilaa hada kama dhargaan daawashada filmkaan waxuuna noqday Hit weyn sanadkii 1999.
Xaqiiqada 6aad: Heesaha filmkaan waxay noqdeen kuwa hirgalen oo aad u gadmeen waxuuna filmkaan kamid noqday aflaamta ganacsi ahaan hirgaleen film ahaan iyo heeso ahaanba.
Xaqiiqada 7aad: Waa filmkii ugu horeyay ee ay wada sameyaan Sanjay Dutt iyo Chandrachur Singh sido kalena waa filmkii ugu horeyay ee ay wada sameyaan Dutt iyo Mahima.
Halkaan Ka Daawo Heesa Filmka Daag Ugu Caansana:
Waxaa Aqrisay 281